စိုင်းစိုင်း ..စွဲနေသည်။မမြင်ဘူးလို့လှန်ကြည့်တာ ..ယုန်လေးပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » စိုင်းစိုင်း ..စွဲနေသည်။မမြင်ဘူးလို့လှန်ကြည့်တာ ..ယုန်လေးပါ။
စိုင်းစိုင်း ..စွဲနေသည်။မမြင်ဘူးလို့လှန်ကြည့်တာ ..ယုန်လေးပါ။
Posted by parparazi on Apr 5, 2010 in Celebrity, Entertainment, Photography | 34 comments
စိုင်းစိုင်း စွဲနေတာ ဘာလဲ။ ယုန်လေး ကလွဲ မလွယ်။ လူများ ကို သွားလှန်နေတယ်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ တော့ မကိုက်ညီဘူးလေဗျာ နဲနဲတော့ ရှောင်သင့်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲ
အားပေးလျှက်ပါ။မဟုတ်ရင် တခြားသူတွေက ဒါမျိုးလူစားမျိုးတွေကို တစ်အား အထင်ကြီးကြတယ်။နောက် အသစ်အဆန်းလေးလဲရှိရင် တင်ပေးကြပါ။
ဆွဲတဲ့ကောင်ကဆွဲ လှန်တဲ့ကောင်ကလှန် …..ကြည့်တဲ့ကောင်ကကြည့်
Post တွေက ထပ်နေသလား မသိဘူးနော်…
အဲဒါမျိုးတွေဆိုရွံတယ် ဘယ်သူအဟုတ်ကြီးထင်ထင် တို့မထင်
မယ်လိုဒီက မေးပါတယ် ၂ချောင်းကြားမှာဘာရှိလဲတဲ့………ဖြေပေးလိုက်ကြပါဗျာ ဟဲဟဲ
ဒါပေမဲ့ ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကြောင့်…….
အထင်သေးချင်းကို ခံရမှာတော့ အမှန်ပဲ…
ကိုယ့်ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မှာလဲ…..
သူတို. ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအပေါ် သူတို.ကရွှံစရာတွေတော့မလုပ်ပြသင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။
hote par ta’
border do. pyaw kya tar tway ka
a kon lone ko right par ta’
but toegyi ka top lee pa’ tang par ta’ ka byar
Lady Moe says:
Oh, my God! What the hell are they doing?
ကျုပ်က ပညာရှင်မျက်စိနဲ့ ကြည့်လိုမြင်တာ
ယုန်လေး ကတော့ ဘလိုင်းကြီးပါလားဗျို့
bar pa` phyt ko money na` ko lout tar bal tu ko ma ma sin sar na`sate shout tal
တကယ်ကို မရှက်တဲ့သူတွေပါ လူမြင်တဲ့နေရာမှာ ပေါ်တင်တော့လုပ်ဖို့မသင့်ပါဘူး
အိမ်မှာရှိတဲ့မိန်းမတွေ ရည်းစားတွေကို တချက်လောက်အားနာကြပါ
လုပ်နေတဲ့သူတွေတော့မသိဘူး မြင်တဲ့သူကတော့ ခန့်လန့်လန့်ပဲဟ
ကျနော်တို.နိုင်ငံကလူငယ်တွေ ရောလူကြီးတစ်ချို.ပါ အတုယူမှားနေ အတွေးမှားနေတယ်လို.ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ ကောင်းတာတွေ အတုယူစရာတွေအများကြီးရှိရက်သားနဲ.အညံ.တွေကိုမှရွေးယူနေတယ်လို.ထင်ပါတယ်။
ခုခေတ်ကောင်မလေးတွေ စင်ပေါ်မှာ ခွေထဲမှာ သူတို.ကတော. ကပြနေတဲ.ပုံကို အလန်းကြီးလို.ထင်နေမှာပါ။
ဒါပေမဲ.သူတို.ကနေတဲ.ပုံစံက နိုင်ငံခြားမှာ ခပ်ပျက်ပျက် ကောင်မလေးတွေ ဘုံဆိုင်မှာ ကနေတဲ.ညစ်တီးညစ်ပတ် နဲ.စိတ်ကြွလာအောင်ကနေတာကိုလုံးဝ အတုယူပြီးကနေကြတာ အောက်တန်းကျပါတယ်။
ယုန်လေးနဲ့ စိုင်းစိုင်းရေ မင်းတိုအခွေတွေကိုငါ့ အိမ်သာတွင်းထဲ ပစ်လိုက်ပီကွ မင်းတိုကို တချို့စော်တွေက နှာဘူးကြီးတွေလို့ပြောနေကြပီ (မင်းတို့မှာပိုက်ဆံရှိတာပဲကွာ Hotel မှာအားမရလို့လားကွာ လုပ်ချင်ရင် Hotel ကိုသွားပေါ့ကွာ) ဒီလိုမျိုးကြီးကတော့မကောင်းပါဘူး သိတာသိ မမြင်စေနဲ့ပေါ့
eric myo says:
သူတို့ အနေနဲ့ ဒါမျိုးမလုပ်ပြသင့်ပါဘူး။
နိုင်ငံခြားက Rapper တွေဆီက ယူသင့်တာပဲ ယူကြဖို့ကောင်းပါတယ်။
လူငယ်တွေအတုခိုးမှားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပျောက်မှာကို စိုးရိမ်မိလို့ပါ။
ကျက်သေ၇တုန်းလိုက်တာဗျာဒီလိုကောင်မျိုးတွေကပိုက်ဆံရှိလို့လုပ်ချင်တာလုပ်နေကျတာလေမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဆင်းရဲနေပြီဒီကောင်တွေကပရိတ်သတ်ဆီကညာယူပြီလုပ်နေကျပြီတိုးတက်မူကိုလက်ခံပါတယ် ဒီလိုကြီးတော့မလုပ်သင်ပါဘူးမြန်မာပြည်ကမောင်ငယ်နှမတွေအတုယူမမှားစေချင်ပါဘူး လုပ်ထားကျပေါ့ကွာပရိတ်သတ်ဆီကညာလဲယူသေးတယ် အဆိပ်တွေလဲခတ်ပေါ့ကွာ မင်းတို့လူမျိုးတွေမကြာခင်ကျဆုံးတော့မှာပါ
ကြိုက်ခဲ့သမျှသွားပါပြီ စိုင်းရဲ့ဂျစ်ကန်ကန်စတိုင်ကိုကြိုက်တာ ခုတော့ရွံ.စရာကြီး
စိုင်းဘာခွေပဲထွက်ထွက် အားမပေးတော့ဘူး ရွံ.တယ် ထွီိ
Rapper တွေမကောင်းဘူးလို့ ထင်တော့ မှာပဲ
ခွေးမသားနှစ်ကောင်တော့ အငံတော်တော်ကြိုက်တယ်နဲ့ တူပါတယ် သွေးတိုးဖြစ်မယ်နော်ဆားဓါတ်လျော့စားပါလို့ ငါပြောထားရဲ့ နဲ့အခုတော့လူရှေ့ သူရှေ့ မှာ
RAPPER ထဲမှာအဲဒီနှစ်ကောင်စောက်ကျင့်အပျက်ဆုံးပဲ၊ တစ်ယောက်ကလည်းSKB ဆိုပြီးနို့မမြင်ဘူးဘူးလားမသိဘူး ၊ဟိုကောင်လုပ်တာ MHA လူတွေအထင်သေးအောင် ကြည့်ချင်၇င်လည်းအိမ်ရောက်မှမင်းမိန်းမစောက်ဖုတ် မင်းလှန်ကြည့်ပါလားကွ
ခုမှ တွေ့လို့ ခုမှ မန့်လိုက်ရတယ်…